Somali Leaks | Voice Of Somalia
Tag Archives: Somali Leaks
GACAN KU DHIIGLE & GACAN QAADE.
Posted on November 29, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Inaaalilaahi Wa inaa Illayhi Raajicuun, geeridu waa xaq, Jooge baaqi ahaade waa Allaah SWT kor ahaaye. Geeridu aqoon ayeey kugu dishaa ama ehelnimo. Waxaan Illaahay uga baryeynaa inuu u naxariisto Axmed Yusuf Cali Faahiye (AXMED GUREY) iyo Mustafe Yusuf Cali Faahiye. Waxaa dhalay labadoodaba adeerkay Yuusuf Cali Faahiye, labadaba waxaa dilay gacan ku dhiigle Gabre & ciidamadiisii.
Axmed Yuusuf Cali waxaa ciidamada Ethiopia ay ku dileen degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisha isagoon hubeysnayn oo aan wax uu galabsadayna la garaneyn. Axmed Gurey waxay geeridiisu timid inyar kadib markuu xaafada oo ku dhoweyd Shiinemo Liibaan uu kasoo tagay. Arintani waxay naxdin iyo argagax ku riday dadkii ehelka ahaa gaar ahaan kuwii gurigii uu xiligaas kasoo tagay kula noolaa oo muuqiisa inyar kahor nolol ku ogaa.
Naxdintani waxay dhalisay in uu murugo iyo maskax wareer ka qaado Mustafe Yusuf Cali Faahiye oo ahaa wiil aad u yar oo aan xamili karin madaafiicdii dhacaysay iyo murugada usoo hoyatay qoyska. Mustafe oo Shock ka qaaday iyo reerkii oo xamili waayay gantaalaha ay ciidamada Ethiopia la bar tilmaameedsanayeen xaafadaha shacbkeena ee caasimada dalkeena ayaa u barakacay magaalada Afgoye ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Maalmo kooban kadib markii ay reerka ku sugnaayeen magaalada Afgoye oo ay xasilooni iyo nabad dareemeen isla markaasna ay caafimaad iyo dabiib u heleen Mustafe oo miyir doorsoon ka qaaday grridii murugada lahayd ayeey hadana ayaan daro usoo hoyatay. Maalinimadaas waxaa magaalada Afgoye Kormeer ku yimid Col. Gabre oo kormeerayay ciidamada Ethiopia oo ku sugnaa Afgoye, gaar ahaan Buundada Afgoye. Mustafe Axmed Cali oo sidii caadada ahayd dhex maraya magaalada ayaa waxaa rasaas geeridiisa sababtay ku furay ciidamadii Col Gabre taasoo sabab u noqotay inuu dhaawac halis ah soo gaaro. Sida ay xaqiijisay websiteka Qaadisiya oo uu xiligaas qori jiray Abdirahim Isse Cabdiraxiim Ciise Cadow oo hada katirsan shaqaalaha Radio Muqdisho ayaa soo daabacay dhaawaca kadib in uu gaariga kasoo dagay Col Gabre oo ciidamadii la socday u sheegay inaanu ninkaan badbaadi doonin oo uu gaaray dhaawac halis ah, sidaas darteedna ay fiican tahay in loo fududeeyo. Arintaas oo ninkii turjubaanka ahaa uu ka biyo diiday taasoo kaliftay inuu Col Gabre lasoo boxo bastoolad uu sadex xabadood madaxa kaga dhufto, si uu u dhameystiro.
Arintani waxay noqotay murugo kale oo usoo hoyata qoyskii awalba la il darnaa tabaalaha murugada leh ee ay ciidamada Ethiopia ay ku kalifeen inay kasoo barakacaan guryahii nabdoonaa ee ay ku noolaayeen duqeynta iyo xasuuqa ay Ethiopia ku haysay dadka caasimada darteed. Waxayna noqotay inay hadana dib uga qaxaan oo ay u cararaan Ceelasha oo ka nabdooneyd Afgooye.
Wuxuu tabaalaha dunida qofba meel ka tuuroba, waxaan ahaa dadka fara ku tiriska ah ee la tacalayay sidii ay u dhiiri galin lahayeen murugada qoyska haysatay oo qofba meel ku heysay. Waxay reerku mudo dheer baadi goobayeen sidii ay u heli lahayeen fursad ay kaga aar gutaan gacan ku dhiiglaha, balse waxaa marwalba isku horgudba kuwa magaca iyo muuqa inala wadaaga.
Anigu waxaan kamid ahay dadka dadaalka u galay sidii Meles iyo Masfin iyo weliba Gabre looga aar gudan lahaa safka hore kaga jiray, Illaahay wuxuu ii gartay inaan geeridii Meles & Raqdiisiiba taagnaado si ay u dhacdayba. Balse nasiibku iima saamixin inaan gacantayda ku guto waajibkaas. Masfin oo saacada aan qorayo la il daran Sun kilyaha fariisisay kili kamida oo aan aaminsanahay inuu sababsan doono iyo Gabre oo godintu u taagan tahay goorey qabataba oo aan waayaha u daayay.
GACANQAADKA GACAN KU DHIIGLAHA.
Soomaalidu waxay tiraahdaa Sagaaradii Bada ku kaadisay Naceedey warisay. Waayo sagaaro waa ogtahay hadey Bada ku kaadiso inaanay Kaadi Sagaaro Bada waxba ka dhibeynin, balse ay nacaybka ay bad u qabto muujinayso. Adigu gacanqaadkaaga dhibanayaasha Gacan ku dhiiglaha waxba u dhimi meyso, balse waxaad warisay xumaanta aad u qabto dadkii dhibanayaasha ahaa oo hadaad garanweysay inaad afkooda ku hadasho, waxay ahayd inaad wadaniyada beenta ah ee aad noo sheegan jirtay ku matasho.
Balse waxaa yaab iyo murugo ah inaad tiraahdid WIIL MUQDISHO KAAGAMA DHIMANIN ADIGA IYO REERKIINABA. QOLODA AAD KA DHALATAYNA IYAGAA ETHIOPIA KEENAY. Aniga qolada aan ka dhashay iyo Ethiopia miyaan kala jeclahay, haday Ethiopia la socdaan. Waan ogaa inaad RAQA RAAC tahay, balse inaad af adayga igula dhiiran karto ma moodeyn.
Caruurtu Bulaca ciyaarbay u dishaa, isagana waa u qurgooyo.
AUN Abwaan Abduqaadir Xirsi Yamyam ayaa laga hayaa.
Waa u dheel inay ubad yaryari,
Isagana Naftoo dhaaftay iyo,
Waxaa sii Kordhaya Xildhibaanada lacagta ku qaatay in La rido Reysulwasaare Cabdiwali Sheekh.
in ku dhaw 175 xildhibaan ayaa hadda jeebk looga buuxiyay xafiiska Madaxweynaha kuwaasi oo isku diyaarinaya in muushin ay ku ridaan Reysulwasaare Cabdiwali Sheekh.
Liiska diiwaangalinta xildhibaanada ayaa sii kordhay saacadihii tagay iyadoo madaxtooyada ay hareeyeen xildhibaanada laaluush-ka qaadanaya.
Xasan Sheekh ayaa la sheegay in Qadar iyo imaaraadka ay kasoo gaartay lacagtii lagu ridi lahaa Reysulwasaare Xiirane oo isna ciyaaray qalaaqanl beesha caalamka oo taageero uu kahaysto gaar ahaan qaramada midoobay iyo Midowga Yurub oo lacag siiya Dowladda.
Nicholas Kay ayaa dhawaan wuxuu walaac ka muujiyay in codadka Xildhibaanada dhaqaalo loo adeegsada islamarkana lagu rido Reysulwasaare Cabdiwali Sheekh.
Kay ayaa wacad kumaray in Qaramada Midoobe la ogeysiin doono wax kasta, oo sababi kara siyaasad xumo oo soo foodsaara dowladda uu madaxda uyahay Xasan Sheekh.
WARBIXIN:-Qaramada Midoobay oo Ku Eedeysay Hay’adda Nabad Sugida Xamar in Suuq Madow uu Iibiso Hubka Dowlada Villa Somalia!
Posted on October 11, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Ururka Qaramada Midoobay ayaa warbixin dheer oo markale uu soo saaray Shalay oo Jumco aheyd waxa uu kaga hadlay Musuq maasuqa baaxadda leh ee dowladda Federaalka ka dhexjira iyo Hubka DF ee lagu iibiyo Suuqyada Madow ee dalka.
Guddiga Golaha Ammaanka ee waxa loogu yeero Qaramada Midoobay u qaabilsan la socodka Xayiraadaha Hubka saaran Soomaaliya (Monitoring Group) ayaa warbixinta ay soo saareen oo ka kooban 482 Bog waxa ay kaga hadleen Hubka dowladda Federaalka ee wali kusii qul qulaya Suuqyada Madow ee dalka, xilli Xukuumadda ay sheegtay in ay ka hortageyso Hubkeeda loo iibgeeyo Suuqyada Muqdisho.
Guddiga ayaa warbixinta ku xusay in 8 xubnood oo kala qeyb qaatay baaritaanno dheer oo lagu sameeyay qaabka DF ay u xakameyso Hubka kujira gacanteeda ayaa lagu sheegay in saraakiisha Nabad Sugda oo ka faa’ideysanaya la xisaabtan la’aanta DF ay Suuq geeyaan Hubka ay leedahay dowladda Federaalka taasi oo noqontay feedax markale wajiga kaga dhacday DF oo horey u baanisay eedeymo loo soo jeediyay horraantii sanadkaani.
Guddiga ayaa ku qeexay warbixinta in ay booqdeen Suuqyada lagu iibiyo hubka isla markaana ay kula kulmeen Ganacsato iibisa Hubka iyagoo kaashanay 8 xubnood oo kala qeyb qaadatay baaritaanada, waxeyna Ganacsatada ay Guddiga u sheegeen in Hubka ay ka iibsadaan saraakiil sare sare oo katirsan Nabad Sugida iyo Sirdoonka DF kuwaasi oo Suuqyada u iibkeena Hubka ay leedahay dowladda Federaalka si qarsoodi ah.
Guddiga waxa uu sidoo kale Ganacsatada uu la kulmay ka helay Macluumaad ku saabsan habka Al Shabaab looga iibiyo Hubka, iyadoo la adeegsanayo silsilad dheer oo daadsan laga soo billaabo Baqaarada ay Hubka ugu keydsan yihiin DF ilaa laga gaaro Suuqyada Madow ee lagu iibiyo Hubka oo ugu dambeyn ku dhaca gacanta Al Shabaab.
Ganacsatada iibisa Hubka ayaa u sheegtay Kooxda ka socotay Monitoring Group in Saraakiisha Hay’adda Nabada Sugida iyo Sirdoonka DF ay Hubka ka iibiyaan Al Shabaab isla markaane ay sameeyaan inta aan la iibin Hubka in laga tirtiro Calaamadda & Nambarka (Serial Number 56-2 rifles), waxeyna Kooxda sheegtay in Hubka sidaasi loo iibiyay loogu keenay Xerada Xalane.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta in DF aysan wax Hub ah kasoo iibsan Dibadda balse ay adeegsato kan ku jira gacanteeda ,taasine ay sabab ka dhigtay in Hubka uu ku filnaawaayo dowladda loogana itaal roonaado dagaallada ay kula jirto Al Shabaab.
Warbixinta waxaa lagu xusay in Hubka ka yimaada wadanka Yemen in uu soo galo gacanta Sirdoonka DF taasine ay dhaliso in si fudud looga iibsado Al Shabaab iyadoo loo marinayo Suuqyo Madow oo kuyaal dalka.
Kooxda la socodka Xayiraadda Hubka saaran Soomaaliya ee Monitoring Group ayaa sheegtay in tan iyo markii Xayiraadda laga fudeediyay DF in ay soo iibsatay hub gaaraya 13,000 (Saddex iyoToban Kun) oo Qori oo ah kuwa fudud iyo 5.5 Million (Shan Malyan iyo Shan Boqol oo Kun) oo Rasaas ah, kuwaasi oo hadda ah kuwa Suuqyada Madow lagu iibinayo, intooda badane gacanta u galay Al Shabaab.
Qaramada Midoobay ayaa horey uga qafiifisay DF Cunaqabateyntii Hubka aheyd ee Soomaaliya la saaray 1992 kadib markii DF ay codsatay in loo ogalaado in dalka dibaddiisa ay kasoo iibsan karto Hub ay kula dagaallanto Al Shabaab.